देउवाको मौनताले रसातलमा पुर्याएको कांग्रेसलाई कसले पार लगाउने ? | Makalukhabar.com
गर्बिलो बिगत नभएका, अपत्यारिलो भविष्य भएका र कुनैपनि हालतमा मुलुक, जनता र पार्टी भन्दा पनि स्वयंलाई महत्व दिने राजनैतिक अवगुण शेरबहादुर देउवाको आवरण तस्वीर हो ।
राजा ज्ञानेन्द्रसँग असहमत हुँदा कोइराला निवासको छिँडिमा र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग असहमत हुँदा दरबारको छिँडिमा रोइकराई गर्ने अद्भुत क्षमता भने उनीसँग लुकेको प्रतिभा हो ।
प्रजातन्त्र चाँदिको किस्तीमा राखेर दरबारमा बुझाउँदा पनि कुनै प्रकारको जरिवाना तिर्न नपरेका भाग्यमानी नेता देउवा कार्यकर्ता र जनताको बिचमा उभिएर सवाल जवाफ गर्ने हैसियत राख्दैनन् । नेपाली राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस जस्तो ऐतिहासिक पार्टीका सभापति र पटक–पटक मुलुकको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री भैसकेका देउवा (सार्वजनिक व्यक्तित्व) सामाजिक दायित्वबाट सजिलै उम्केर नीजि र व्यक्तिगत जीवन बिताउन रमाइलो मान्छन् ।
'एउटा चुनावी घोषणा समेत नबनाइकन मैदानमा उत्रँदा कांग्रेस रसातलमा पुग्यो । यदी उक्त निर्वाचन अघि पार्टीले कम्तिमा जिल्ला भेला गरेको भए, कम्तिमा महाधिवेशन बैठक डाकेर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई ताजगी दिएको भए अहिले यो हालत हुने थिएन ।'
यत्रो उचाइको व्यक्तित्व नीजि र पारिवारिक हुनसक्छ ? उहाँको जवाफहिनता र गैर जिम्मेवारपनको जवाफ नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले कसरी र कहिले सम्म पुष्टि गर्न सक्छन् ! देउवाले केपी ओलीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको रजगज भित्र रुमलिइसकेको र सत्ताको साझेदारी भित्र रहि सरकारलाई भित्री रूपमा सहयोग गरिरहेको भन्दै नेपाली जनता र आम कार्यकर्ताले प्रश्न उठाइरहेका छन् । तर, देउवा एक कानले सुन्ने अर्को कानले उडाउने गर्दै बसिरहेका छन् ।
देउवाले जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले सरकारका अनगिन्ती काण्ड, शिखरमा चुलिएको महंगी, नियोजित भ्रष्टाचार र विकास आयोजनाहरुमा देखिएका अनियमितताका विरुद्ध रोष्टममा उभिएर आफ्नो सारगर्भित जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने हैसियत गुमाइसकेका छन् । पछिल्ला दिनहरुमा देउवाको मौनताले यो कुरा पुष्टि गरिसकेको छ कि उनी कांग्रेसको सभापति हुन लायक रहेनन् । उनको बुद्धि र विवेक अनुसार सभापति पद भारी भएको छ ।
ओली सरकारले जता हिँड भन्छन् उतै लम्किने र यो बोल भन्दा त्यहि बोल्ने सरकारको लाचार छायाँले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कसरी प्रतिपक्षको नेताको अहम भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, सोचनिय छ ।
अब कुरा गरौं, कांग्रेसको हविगतको । स्थानीय निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन अगाडी कांग्रेसले आफ्नो लाइन क्लिएर गर्न सकेन । यसो भनौं आन्तरिक विवाद र गुट उपगुटमा रुमलिएको कांग्रेसले आफैंले घोषणा गरेको निर्वाचनमा आफ्नै पार्टीले भाग लिन्छ भन्ने नै भेउ पाएन । फलस्वरुप एउटा चुनावी घोषणा समेत नबनाइकन मैदानमा उत्रँदा कांग्रेस रसातलमा पुग्यो । यदी उक्त निर्वाचन अघि पार्टीले कम्तिमा जिल्ला भेला गरेको भए, कम्तिमा महाधिवेशन बैठक डाकेर आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई ताजगी दिएको भए अहिले यो हालत हुने थिएन ।
निर्वाचनमा भोगेको पराजयको समिक्षा भइसकेको वर्तमान अवस्थामा पुनः त्यहि घाउ कोट्याउनु उचित नहोला । तर, अहिले कांग्रेसले देशव्यापी जागरण अभियान सुरु गरिरहँदा कार्यकर्ता भित्र उत्साह र उमंग नदेख्दा यो विषय उठेको हो । इतिहासमा भोगेको पराजयबाट पाठ सिक्दै अगाडी बढ्नु पर्दथ्यो । बिडम्वना, सभापति अझैपनि त्यहि गल्ती गर्दैछन् ।
संविधान कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको भनेर जस लिइरहेका सभापति देउवाले निर्वाचनमा भोगेको पराजयको जिम्मेवारी अझै पनि लिइसकेका छैनन् । यो नै ठूलो कमजोरी हो । अब पुनः पार्टीलाई पहिलेकै अवस्थामा लैजाने हो भने, सभापति देउवाले त्यागको राजनीति गर्नै पर्दछ । र, त्यो त्याग आउँदो महाधिवेशनमा देखाउनु पर्छ । कांग्रेसले मुलुकको लोकतन्त्र, गणतन्त्र, सार्वभौमिकता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षार्थ सदैव जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
देउवाको मौनताले कार्यकर्ता विच्छिप्त भएका छन्, निराश भएका छन् । जागरण अभियानमा हिँड्ने जाँगर छैन । दिउँसै नुन खाएको कुखुरा जस्ता भएका छन् । यस विषम परिस्थितिबाट कांग्रेसलाई उठाउने जिम्मेवारी डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता नयाँ पुस्ताको काँधमा आउनुपर्छ ।
लेखक योगेन्द्र साउद नेपाली कांग्रेसका साधारण सदस्य हुन् ।
प्रचारबाजी र प्रियतावादको लोभले गाँजेको बजेट ल्याउनुहुँदैन्: पूर्व मुख्य सचिव कोइराला
सरकारले आयात हुने कृषिजन्य पदार्थको विषादी परीक्षण गर्ने नियम लागू गर्‍यो। आवश्यक तयारी बिना काम सुरु गरेकाले अप्ठ्यारो त पर्ने नै भयो। झन्झटिलो त हुने नै भयो। तर पनि काम सही भएकाले केही समयका लागि महंगो तरकारी खाएर होस्, वा तिउन बिनाको भोजन गरेर होस्। सरकारको कामलाई सहयोग गर्न तयार भएकै थियौं।... जारी राख्नुहोस...
थारु समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा अगाडी बढाउने ब्यक्तित्वको रुपमा लिइन्छ स्वर्गिय दिनेश चौधरीलाई । २०२४ बैशाख २ गते दाङ जिल्लाको सोनपुरमा जन्मनु भएका स्व. दिनेश चौधरी सानै उमेरदेखि समाजसेवा, जातीय पहिचान र कला संस्कृति प्रति असाध्यै रुचि राख्ने गर्नुहुन्थ्यो । आर्थिक रुपमा उहाँको पर... जारी राख्नुहोस...
असार ५ गते दिनभर जस्तै सर्लाही–लालबन्दी १ लखन्ती खोलामा भएको घटनाले सनसनी मच्चायो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश २ मुख्यालय र सर्लाही जि.प्र.का.ले ‘विप्लव समूहका कार्यकर्ता सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेल प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमा मारिएको र उनको साथबाट हतियार बरामद भएको’... जारी राख्नुहोस...